Home Wararka Dowlada Kenya oo dalkeeda ka masaafurisay Xasan Kheyre. Waa maxay Sababta?
Dowlada Kenya oo dalkeeda ka masaafurisay Xasan Kheyre. Waa maxay Sababta?
Dowlada Kenya ayaa asbuuc ka hor waxa ay Xasan Kheyre ku wargalisay in uu dalkeeda uga baxo mudo asbuuc ah. Xasan oo mudo 46 cesho ku sugnaa dalka Kenya ayaa maalintii shalay ahayd waxaa laga soo masaafuriyay dalka Kenya, laguna celiyay dalka Kenya.
Xasan Kheyre oo dhowr maalin ka hor la kulmay qaar kamida beesha Murusada, gaar ahaan qaybta haweenka oo ay soo qaban qaabisay xaaska uu qabo Sharif Xasan oo ay isu qoys yihiin Kheyre ayuu ku sheegay culeysyada kala duwan ee soo food-saaray.
Dhanka kale waxa soo baxaya warar is khilaafsan oo ku saabsan sababta ay dowlada Kenya dalkeeda uga soo musaafurisay Xasan Kheyre. MOL oo isku dayday inay hesho xogta rasmiga ee arintaa uma suuragalin in ay si dhab ah u ogaato waxa ay salka ku heyso sababta loo soo musaafuriyay Xasan Kheyre.
Xogag hordhac oo ay heshay MOL ayaa sheegaya in Labo asbuuc ka hor ay magalaadda Nairobi yimaadeen saraakiil ka socoto hay’ada Baaritaanka dabniyada Mareykanka ee loo yaqano FBI oo wareysi kula yeelatay Kheyre guri ku yaalo degaanka Karen ee magalada Nairobi.
Saraakiishaas ayaa dabagal ugu jiray in ay wax ka ogaadeen lacag Xasan Kheyre looga soo diray dalka Ruushka, taas oo ku xayiran bangiga weyn ee dalka Kenya Equity Bank. Lacagtaan laga xayiray Kheyre ayaa la xirirta heshiis uu horay ula galay dalka Ruushka taas oo lagu xaraashayay Kheyraadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Dhanka kale waxa iyada la soo xiray labo koonto uu ku lahaa labo bank oo ku yaalo Jasiiradaha Cayman Island, xaafadeeda George Town iyo Jasiirada Maalta. Bangiga ku yaalo Jasiirada Cayman Island ayaa waxa sidoo kale koonto uga furan tahay Shirkada Lagu badalay SOMOIL oo uu Xasan Kheyre ku leeyahay Saami fara-badan badan.
Shirkadda Coastline Exploration Limited ee dhawaan uu heshiiska qarsoodiga la soo saxiixday wasiirka Bartoolka Cabdirashiid Shiikhaalow ayaa iyadana waxa ay xiriir ganacsi la leedahaya shirkadii la oran jiran SOMOIL. Shirkadaan ayaa waxa maamulkeeda sare ka mida ah saraakiil Ruush ah oo xiriir ganacsi uu kala dhaxeeyo Xasan Kheyre.
Lacagta aan cadadkeeda la sheegin ayaa si dhuumaaleysi ah loogu soo diray Kheyre, iyada oo laga qarinaayay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Kheyre oo horay loogu diiday VISA-ha dalka ku-galka Mareykana ayaa hadana waxa hada ku socda baarintaan danbiyeed oo ay hogaanka u hayso haya’dda FBI.
Kheyre ayaa horay looga dhacay lacag lagu sheegay in ay gaareyso $16 Malyan oo markeedii hore laga soo dhacay dalka Soomaaliya. Lacagtaas ayaa waxaa Kheyre ka dhacay labo nin oo walaalo ah oo Somali-Kenyan kana soo jeedo beesha Dagoodi.
Beeshaaan ayaa ugu danbeeyntii ku wargalisay Xasan Kheyre in uu lacagtiisa si sharci ah ku raadsado, isla-markaana dacweeyo raga uu sheegay in ay lacagta ka dhaceen. Laakiin Kheyre ayaa ka baqayo in la waydiiyo meesha uu lacagtaas ka keenay taas ayaana keeetay in uu gabi ahaanba ka haro dabagalka lacagtaas.
Kulankii uu Xasan Kheyre la yeeshay beesha Murusade ee aan kor soo sheegnay ayuu u sheegay beeshiisa in ay hayso dhaqaale xumi aad u xun waxa uuna beesha ka codsaday in ay qaaraan lacag ah u ururiyaan si uusan doorashada uga harin.
Waxa ay u muuqata raadinta xilka Madaxweynaha ee Xasan Kheyre ay tahay fursad uu uga badbaadi karo in ay sii socoto dacwada ay wado dowlada Kenya? Su’aashu waxa ay tahay shacabka Soomaaliyeed ma dooran karaan shaqsi dacwad caalami ah ku socoto? Gaar ahaan marka la fiiriyo dagaalka cirka isku shareeray ee u dhaxeeya Mareykanka, Yurub oo dhinac ah iyo dalka Ruushka.
Previous articleMaamulka Garbahaarey oo shirkadaha diyaaradaha ugu digay iney soo qaadaan guddiga qiimeynta. Sabab?
Next article[Deg Deg] Guudlaawe oo diiday in kuraasta la xiro & Dabageed oo dagaal ku hanjabay
Caasha Shaacur/Zeynab: “Walaahan will Hiraab ah ku fariisan kursiga Kheyre, hadii...
Musharixiintii hore oo aqoonsanaya xildhibaanada cusub, codsadayna inay qayb ka noqdaan...